८ प्रकारका पतिहरु, तपाईँ कस्तो त ?
March 21, 2018 November 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment Husbands, पतिहरु
८ प्रकारका पतिहरु, तपाईँ कस्तो त ? विवाह गरेपछि स्त्रीले विवाहित पुरुषसँग जोडिने स्त्रीको नातालाई पति भनिन्छ । कतै कतै पतिलाई लोग्ने अथवा श्रीमान पनि भनिन्छ। तपाईलाई थाहा छ पति कति प्रकारका हुन्छन् ? पतिका ८ प्रकारहरु यस प्रकार छन् ।
१) पुरुषार्थ पति
घरकी पत्नी बाहेक बाहिर अरु जति धेरै केटीहरुसँग सम्बन्ध राख्न सक्यो, उति आफूले पुरुषार्थ देखाएको ठान्ने । ऐनामा आफ्नो अनुहारको चाउरी नदेख्ने तर बाहिरका केटीहरुको यौवन देख्ने ।
२) शक्तिमान पति
बेलुकी घर आउँदा स्वास्नीले मासुको सितन र ठर्रा टेबुलमा ठिक पारेकी रहिनछ भने वा जुवामा हारेर आएको होस् वा भनेको मानिन भनेर होस् अथवा जेसुकै कारणले होस् घरकी स्वास्नीलाई पिटी पुरुषत्व देखाउने । स्वास्नीमाथि हात हाली पिट्नु, लछार्नु-पछार्नु त मानौँ उसको पुर्ख्यौली अधिकार हो ।
३) अलौकिक पति
यो लोकमा पाउन अति दुर्लभ तर कतै कतै पाई हाल्न पनि सकिने । पाउन दुर्लभ किनभने प्राय जसो अरु भन्दा धेरै फरक खाले। अति समझदार, सहयोगी, माया गर्ने, जे कुरामा पनि पत्नीको सल्लाह माग्ने, उसको हालखबर सोध्ने अनि उसको पनि आवश्यकताहरु र दुःखसुख बुझ्ने, सबै भन्दा ठूलो कुरा: पति र पत्नी भनेको जीवनरुपी रथका दुइ पांग्रा हुन् र जीवन सफल पार्नका लागि हामी दुवैलाई समान रुपमा एक अर्काको आवश्यक छ भनेर बुझ्ने ।
४) सोमरस पति
सँधै तीन घ्याम्पो रक्सी धोकेर घरमा आई स्वास्नी पिट्ने । रक्सीको नशा चढेपछि घरकी स्वास्नी हो वा बाहिरिया आइमाई हो छुट्टयाउन नसक्ने। भाँडोमा रगतको बान्ता नगरुन्जेल ठाडो बोतल लाउन नछोड्ने ।
५) वाकवाक पति
आफूले पत्नीलाई जति तथानाम गाली गरे पनि पत्नीले चाहीँ चुपचाप टाउको निहुराएर एक शब्द नबोली सुनिरहोस् भन्ने इच्छा गर्ने। जति आफूले पत्नीलाई धेरै गाली गर्यो , उति नै आफ्नो वाककला राम्रो भएको ठानी गर्व गर्ने ।
६) पानीमरुवा पति
घरमा आमा, दिदीबहिनीहरुले बिना कारण वा सानो कारणले आफ्नी पत्नीलाई पिटे पनि, गाली गरे पनि, मार्ने आए पनि आफू चाहीँ थरथर काम्दै कोठाको एक कुनामा गई थचक्क बसी टाउको घुँडामा लुकाउने ।
७) विलासी पति
पत्नी भनेको केवल आफूले चाहेको बेलामा आफुसँग ओछ्यानमा समय बिताउने र छोराछोरी जन्माउने मात्र हो भन्ने ठान्ने। सोच्छ कि पत्नी त केवल उसको व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्न मात्र बनेको हो ।
८) खोपे पति
पत्नीलाई सजिएर केवल आफ्नो घरको खोपामा वा शो केशमा मात्र बसिरहोस् भन्ने, घरबाट छिसिक्क कतै बाहिर निस्कन त के, झ्यालबाट यसो बाहिर चियाउन पनि नदिने। उसलाई कतै जाने पर्ने भयो भने पनि आफू चाँडै घर आई आफ्नो निगरानीमा त्यहाँ पुर्याेई दिने । आफू बाहेक पत्नीले अरु कोही लोग्नेमान्छेलाई आँखा उठाएर नेहेरोस् भन्ने। अरु कोही लोग्नेमान्छेसँग यसो बोलेको देख्यो कि त ऊ त्योसँग सल्की भनेर आरोप लगाउने।
७ प्रकारका पत्नीहरु, तपाईँकी पत्नी कस्ती छिन् त ?
← को हुन् सोफिया रोबोट ?
७ प्रकारका पत्नीहरु, तपाईँकी पत्नी कस्ती छिन् त ? →
November 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 5
November 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले दिन नै शुभ हुन्छ
September 1, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
One thought on “८ प्रकारका पतिहरु, तपाईँ कस्तो त ?”
Pingback:७ प्रकारका पत्नीहरु, तपाईँकी पत्नी कस्ती छिन् त ?